यस्तो छ बजाज बाइकको नयाँ मूल्य, कुनको कति ? - Arthatantra.com
यस्तो छ बजाज बाइकको नयाँ मूल्य, कुनको कति ?
काडमाडौं । नेपाली बजारमा लोकप्रिय मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी हो बजाज । बजाजका नेपाली बजारमा पल्सर, एजेन्जर, डिस्कभर चर्चित अनि लोकप्रिय मोटरसाइकल हो ।
नेपालमा बजाजको लागि आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले हो । बजाज बाइक नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय र धेरै बिक्री हुने गर्दछ ।
बढ्दो सवारी चापले गर्दा सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने ढिलाइका कारण पनि मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो छ ।
यस्ता आवश्यकता पुरा गर्न विभिन्न कम्पनीले विभिन्न प्रकारका मोटरसाइकल उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपाल बजाजको विभिन्न १२ भेरियन्टमा १२ मोडेल उपलब्ध रहेका छन् ।
वि.सं.२०७८ पुस २२ बिहीवार १३:११ मा प्रकाशित
अघिल्लाे आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा साढे १४ अर्ब रकमान्तर